Druzhba-intanethi: Yintoni na, Okuninzi, disadvantages, Iincam - Ividiyo Incoko - Eyona!
Druzhba-intanethi: Yintoni na, Okuninzi, disadvantages, Iincam
Ngoko ke, friendship-intanethi sele Yayo pros kwaye cons
Kwi-neminyaka engama-Internet uphuhliso, Live unxibelelwano ngu-thatha ngokunciphisa, Endaweni yokuba kukho inani elikhulu Loluntu nezo ze-ngephanyazo ke Abathunywa apho uyakwazi ukugcina ubudlelwane Real abahlobo kunye nosapho lwakheentsha onesiphumo abahlobo. Kunjalo, le ndlela yokusebenza ngu Iluncedo kakhulu, njengokuba kubhaliwe akavumeli Ukuba ukuchitha ezininzi ixesha ikhangela companions. Kwesinye isandla, olu hlobo friendship Sele ezithile disadvantages. Ngoko ke, yintoni dibanisa kwaye Thabatha imiba onesiphumo Dating kwaye unxibelelwano? Nokuba indlela leyo transition kwi-Intanethi friendship ngomatshini, kubalulekile ukuya Kwi-omabini amaqela ukuba uyavuma Kwi enjalo inyathelo. Ngenye indlela, umntu uza kuba Oko, iya kuba victim ka iimeko. Nokungabikho ixesha imikhosi abantu ukwenza Iintshukumo ezifana, umzekelo, abahlobo kwi Umsebenzi womnatha. Emva zonke, kwi-namhlanje ke Turmoil, umntu kufuneka ukufunda emsebenzini Kwaye ngamanye amaxesha onke kanye, Yiya receptions, umlindo wobusuku, indlu Kunye nabantwana, kwaye ngexesha elinye Uthando ukuze wonwabe. Esi sihlomelo amagqabi ixesha kuba Intlanganiso entsha abantu kwaye bechitha Free ixesha kunye nabahlobo. Ngoko ke, kufuneka siqale onesiphumo Abahlobo okanye tshintsha unxibelelwano kunye Real abahlobo kwi-intanethi. Ngoko ke, friendship-intanethi ayiyi Kuphela convenient, kodwa kanjalo profitable. Oku ifomu ingxoxo kubalulekile ezilungele Kuba abantu abathe usapho kwaye Inani elikhulu lwemisebenzi, ngokunjalo kuba Abafundi abakhoyo ilungele entsha acquaintances Kwaye constantly ukuhamba jikelele ehlabathini. Nangona kunjalo, oku indlela ubudlelwane Nabanye abantu sele abanye drawbacks. Xa abantu lofundo-nzulu-intanethi Kwaye zange khangela kuyo yokwenene Ebomini, bamele ngakumbi sifuna kuba Illusions malunga friendship.
Abanye psychologists ingaba iqinisekise ukuba Friendship kunye abantu ikuvumela ukuba Uzive yayo aura, kodwa ke Unako kanjalo kuba e a Personal ntlanganiso.
Ukuba kukho imiceli-friendship kokuya Kwi kule ifomati, ngoko ke Lento kanjalo engalunganga umqondiso kwaye Lubonisa ukuba abantu bamele ayisasebenzi Anomdla ngamnye enye, ngoko ke Wena musa bona na isizathu Kuhlangana kwi umntu correspond amaxesha ngamaxesha.
Ngoko ke, kubalulekile kananjalo hayi Kukunceda kakhulu uthetha inyaniso malunga Friendship kule meko.
Omnye disadvantage ka-onesiphumo friendship Kukuba oko reduces ukuthelekisa unxibelelwano Ukuba ubuncinane, ebangela abantu loneliness, Usamuel, kwaye depression. Senzo ibonisa ukuba loluntu abantu Ukuze ngakumbi impumelelo ebomini, kwaye Ukuba ufuna deprive ngokwakho yonke Imihla okanye ubuncinane, veki zonke Iintlanganiso kunye nabahlobo bakho, le Nto fraught kunye no-zoko Kuba psyche kwaye impumelelo. Ngenxa zonke disadvantages, njengoko kuchaziwe Ngasentla, friendship-intanethi ayikho ezilungele Kuba sociable abantu abo bafuna Ukuba abe elungileyo imilo, nokuba Ngokwesini kwaye ubudala.
Kanjalo, abantu abathe i-ngokomgaqo-Yenza isangqa ka-abahlobo kunye Yithi rhoqo ukuchitha ixesha kunye Abasayi kukwazi ukuphila ebomini bakho Ngokunxulumene eli-siseko.
Olu hlobo budlelwane kanjalo hayi Ezilungele kuba abo awunayo relatives Okanye usapho, njengoko omnye abantu Kufuneka rhoqo inkxaso. Nangona kunjalo ukuba okuninzi outweigh I-disadvantages, akuyomfuneko ukuba lahla Real budlelwane nabanye ngaphandle womnatha, Kungenjalo sinokukhokelela ezinzima psychological iingxaki Kwaye lonely umntu.
Siphakamise ubagadisiweyo a ividiyo apho Psychologist Ekaterina Denisova izahlulo yakhe Iimboniselo kwi friendship kwi-Intanethi:.
Free imihla Kunye amadoda Kuzo
Strainséirí Comhrá a Dhéanamh ag An roulette Ar líne
ividiyo Dating kunye kubekho inkqubela ngaphandle ubhaliso dating site ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko- ubudala erotic ividiyo iincoko ividiyo Dating akukho ubhaliso ividiyo incoko amagumbi-intanethi ividiyo Dating site free ividiyo Dating kunye kubekho inkqubela incoko ngaphandle ubhaliso ividiyo Dating nge-girls-intanethi free free chatroulette